हेर्दा हेर्दै छोरो जागिर खाने भैसकेछ । बा-आमा दंग थिए । छोराले स्नातक सकाउने बितिक्कै बैंकमा नाम निकालेको थियो । पढाइमा ठीकठाक, बोल्नमा ठिक्क पार्ने, घरमा खाना खान पनि दस चोटी बोलाउनुपर्ने, मोबाइलमा चौबिसै...
काठमाडाैं । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप तथा २०२३ मा चीनमा हुने एशिया कपको संयुक्त छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको छनोट खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ । गए राति भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग ३–०...
‘ओहो ! घिमिरेजी, अफिस जान लाग्नुभएको ? हामी सुरक्षित बसेकालाई तपाईंले कोरोना सार्ने हुनुभो जस्तो छ । सधैं बैंकको जागिर भन्दै लखरलखर अफिस जानुहुन्छ ।’ बिहान नौ बजेतिर अफिस जान बाइक निकाल्दै थिएँ, एक...
काठमाडाैं । युएनसिडिएफ र युएनिसकेपसँगकाे सहकार्यमा खल्तीले घरेलु, सानो तथा मध्यम व्यवसाय गर्ने महिला उद्ममीलाई प्रशिक्षण दिइरहेकाे छ । प्रशिक्षण मार्फत खल्तीले महिला उद्यमीहरुलाई आर्थिक रूपमा अझ बढी स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएकाे छ । खल्ती...
२०७८ जेठ २० गते १०:०६ विकासन्युज
काठमाडाैं । दया फाउण्डेशनले देशमा व्याप्त कोरोना महामारीको संक्रमणको उपचारको क्रममा खडा भएका चुनौती तथा समस्याहरुको समाधानमा राहत पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुलाई विभिन्न चिकित्सा उपकरणहरु प्रदान गरेको छ । संस्थाले टेकु...
काठमाडौं । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (डब्लुएचआर) ले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचारमा सम्लग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सहयोगी कर्मचारीलाई दैनिक पौष्टिक आहार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । शरीरमा शक्ति आर्जन...
अवकास प्राप्त खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सुलभ कर्जा
२०७८ जेठ १५ गते १७:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अवकास प्राप्त खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सुलभ दरमा कर्जा दिने बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पाैडेलले देशका राम्राे खेलाडीहरुलाई...
खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट
२०७८ जेठ १५ गते १७:४० विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले आगमी वर्षको लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेले साे बताएका हुन् ।...
२०७८ जेठ ११ गते १५:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । लक्ष्मण बाबु मेमोरियल ट्रष्टले गोरखा र चितवनका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य केन्द्रलाई ८ थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेक्टर उपलब्ध गराएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अर्नतगत जिल्लाका ग्रामिण भेगमा संचालित स्वास्थ्य सेवालाई संस्थाले उक्त सामाग्री उपलब्ध...
२०७८ जेठ ८ गते १८:०० सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
खै, हजुर त कस्तो मान्छे …। अस्ति मेरो जन्मदिनमा पनि फेसबुकमा ह्यापीबर्थ डे बुढी भनेर दुई शब्द लेख्नु भएन् । मन्दिर त लानुभयो । फोटो पनि खिच्नुभयो तर फेसबुकमा राख्नुभएन ? हेर्नुत अरुका बुढाहरुले...
काठमाडाैं । बैगुनी छ मान्छे । कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट देखा परेसँगै आक्रान्त छ मुलुक । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । नफर्कने बाटो लाग्नेहरु बढिरहेका छन् । त्यसको त आत्मबल र उपचारका कारण...
काठमाडाैं । ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज बुङ्मती लगिने भएको छ । मुलुकमा बढिरहेको दोस्रो लहरको नयाँ कोभिड भेरिएन्टका कारण यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई अनुमान गरी मच्छिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लाग्दा छ महिना पाटन...
« अघिल्ला 1 …34567… 142 पछिल्ला »